Egipta: Ao an-tseranam-piaramanidina iraisam-pirenen’i Cairo …Mitandrema ianao raha toa ka mpitoraka blaogy! · Global Voices teny Malagasy
Egipta: Ao an-tseranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Cairo …Mitandrema ianao raha toa ka mpitoraka blaogy!
Voadika ny 04 Janoary 2010 13:18 GMT
Tato ho ato ireo ONG goavana sy seha-pikarohana samihafa saiky maneran-tany mihitsy dia nanjary liana dia liana amin'ny fihainoana izay ambaran'ireo mpitoraka blaogy Arabo sy ny hafanam-pon'izy ireny amin'ny tontolo niomerika, ratsy vintana ireo Egiptiana mpitoraka blaogy ao amin'ny seranam-piaramanidin'ny fireneny! Toy ireo mpitoraka blaogy maro nanana olana tao amin'ny seranam-piaramanidin'i Cairo, noho ny zavatra nosoratan'izy ireny hita amin'ny aterineto, toa an'i Wael Abbas izay voarahona rehefa hivoaka na hiverina ao Egypta ka notazonina tao amin'ny biraon'ny mpitandro filamionan'ny seranam-piaramanidina, avy eo nogiazana ny solosaina fivimbiny, taty aoriana indray dia izay rehetra mety no fitaovana niomerika nentiny.
Abbas izay voaasa amin'ny fihaonambe faharoan'ny Arabo Mpitoraka blaogy any Beiroty dia niharan'ny antsojay indray tamin'ny diany hody ‘nosakanan'ny mpitandro filaminana aho ary dia namarinina indray ny fahazoan-dalana mivezivezy (pasipaoro)!” saingy tsy olana goavana ho an'ny mpitoraka blaogy toy izany izay fahataràna, efa fahazarana ny very solosaina fivimbina eny an-tseranana! Hatramin'ny volana Jolay 2009, rehefa tonga teny an-tseranana, tsy nahazo niondrana niaraka tamin'ny solosaina fivimbina, flash fitahiry na CD i Abbas.
Saingy tsy i Al Wa'i Al-Masri (The Egyptian Awareness) mpanoratra akory no mpitoraka blaogy voalohany, toy ny tamin'ny 2007 nogiazan'ny Sampan-draharaham-panjakana misahana ny filaminana i Abdul Moneim Mahmoud navoaka ny fiaramanidina tao an-tseranan'i Cairo, izay teo no nanombohany andro vaovao amin'ny fanadinkadinana samihafa sy fitazonana azy angamba fampiasan-kery aza, izay efa niaretany tany aloha tany avy amin'ny tànan'ny Ministeran'ny Atitany Egiptiana. Tamin'io taona io ihany, ity tanora mpitoraka blaogy ity dia nogiazana raha handeha ho any Sodana [Sudan]. Notazonina nandritry ny 47 andro izy talohan'ny namotsorana azy. Na izany aza, Mahmoud izay manoratra ao amin'ny blaogy Ana Ikhwan (Mpikambana ao amin'ny Rahalahy Silamo aho [I'm a Muslim Brothers Member]) dia efa nosamborina koa tao an-tseranan'i Cairo tamin'ny 2008 ary tsy navela hiondrana hamonjy Kaonferansa momba ny fahalalahan'ny fanaovana gazety tao Maraoka.
Hatramin'izay i Mahmoud dia mbola nentina indray mandeha koa minitra vitsy mbola teo ampiandrasana ny fiondranana ihany hankao amin'ny foiben-toeran'ny Sampan-draharaham-panjakana mitandro ny filaminana ao amin'ny seranan'i Cairo , ratsy vintana kely kosa i Per Bjorklund! Nolazain'ny mpitandro filaminana iray tamin'ity mpanao gazety Soedoa sady mpitoraka blaogy ity fa “‘Ao anaty solosaina ny anaranao!” Noho izany, nentina niverina tany an-tseranana izy talohan'ny nampodiana azy any amin'ny firenena niaviany. i Per Bjorklund izay saiky nitoraka blaogy foana mikasika ny fitokonan'ny mpiasa tany Egipta dia nilazana fa olona tsy ilaina, na “persona non grata” izy any Egipta.
Ny teny iray hoe ‘Mpitoraka Blaogy’, na ‘Blogger’ dia nanjary zava-mahatahotra ho an'ireo manampahefana Egiptiana taorian'ny laza azon'ny maro teo amin'ny tontolon'ny fitorahana blaogy, noho ny famoahana ireo heloka bevava sy ny firesahana ny olana ara-tsosialy sy ny zon'olombelona, tsy nolazaina tany anatin'ny fampitàm-baovaom-panjakana.